नायिका स्वस्तिमा र अर्जुन कुमार बीचको झ’गडा के हो ? – Gandaki Chhadke
काठमाडौं : नेपालमा केटा र केटीको विवाह हुनु भन्दा अगाडि दुई जनाको चिना मिल्छ वा मिल्दैन भनेर ज्योतिषलाई हेराए पछि मिल्छ भने मात्र विवाह गर्ने चलन छ । चिना मिल्यो भने बैबाहिक सम्ब’न्ध दिगो हुन्छ भनिन्छ । अब नेपाली फिल्मका निर्माता र कलाकारहरुले पनि एकअर्काको चिना ज्योतिषलाई देखाएर झ’गडा हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र फिल्ममा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
फिल्ममा काम गर्ने समयमा एकअर्काको प्रशंसा गरेर नथाक्ने निर्माता र कलाकारहरु फिल्म रिलिज हुने समयमा भने एकअर्काको दु’श्मन भइसक्छन् । आगामी पुष २ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘चपली हाइट ३’ का निर्माता अर्जुन कुमार र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का बीचको झ’गडा हेर्दा निर्माता र कलाकारको सम्ब’न्ध कुकुर र विरालोको जस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
‘चपली हाइट ३’ रिलिजको सम्मुखमा छ । एकातिर साउथ फिल्म ‘पुष्पा’ र अर्कोतिर हलिउडको ठूलो फिल्म ‘स्पाइडर म्यान’ सँग कसरी भि’ड्ने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्थामा निर्माता अर्जुन कुमार भने आफ्नै फिल्मकी अभिनेत्रीसँग भि’डेर बसेका छन्। एक टिभी शोमा उनले आइन्दा स्वस्तिमासँग आफूले काम नगर्ने र अरुले काम गर्न खोजेको खण्डमा पनि एकपटक सोच्नु पर्ने बताएका थिए ।
केही दिनअघि एक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पनि निर्माता कुमारले आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा बोलेको र त्यही नै सत्य रहेको बताए। स्वस्तिमाले भने चित्त नबुझेको कुरा बोल्न पाइने छुट सबैलाई रहेको भन्दै यस विषयमा आफूले जवाफ दिन आवश्यक नरहे को बताएकी थिइन् । उनले निर्माता अर्जुन कुमारको अभिव्यक्तिलाई फिल्मको प्रचार गर्ने उपायको रुपमा अर्थ्याएकी छन् ।
आखिर झग’डाको कारण चाहिँ के हो? स्वस्तिमा खड्का र अर्जुन कुमारबीच पारिश्रमिक लेनदेनको विषयबाट झ-गडा सुरु भएको स्रोतको भनाई छ। निर्माताले आफ्नो पारिश्रमिक दिन आलटाल गरेपछि स्वस्तिमाले फिल्मको नयाँप्रदर्शन मिति सहितको पोस्टर समेत सामाजिक सञ्जालमा शेयर नगरेको चर्चा छ । यो कुराले अर्जुन आ’गो भएका थिए । फिल्मको ट्र्रेलर रिलिज कार्यक्रममा भने स्वस्तिमा उपस्थित भएकी थिइन् ।
ट्रेलर रिलिजपछि फिल्मको प्रचार सुरु हुन्छ । निर्माण टिमले मिडियामा ‘चपली हाइट ३’ को पब्लिसिटीका लागि कलाकारहरुको सेड्युल बनाएको थियो । तर, स्वस्तिमाले केही अन्तर्वार्तामा जान अस्वीकार गरेपछि अर्जुन कुमार रिसले उ’ग्र भएको बताइन्छ। उनी स्वस्तिमासँगको एग्रिमेन्ट पेपर समेत सार्वजनिक गर्ने मूडमा थिए रे । तर, अरुले सम्झाएपछि उनले यो निर्णय भने लिएनन् ।
ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा स्वस्तिमाले टिमसँग सानोतिनो मन मु’टाव भइरहने भन्दै यसलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको बताएकी थिइन् । उनले निर्मातासँग मन मुटा’व हुनुको कारण भने खुलाउन चाहिनन्। अर्जुन पनि पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर मन मुटा’व भएको स्वीकार गर्दैनन् । आफूले बनाएको सेड्युल अनुसार नहिँडेकाले स्वस्तिमा प्रति उनको आ’क्रोश चुलिएको स्रोत बताउँछ। फिल्मको रिलिज नजिँकिदै गर्दा स्वस्तिमा सकेसम्म प्रचार-प्रसारमा दौडिरहेकी छन् । उनले यो बेला मौन बस्नु नै उचित ठानेकी छन् । तर, निर्माता अर्जुन कुमार भने उनीमाथि खनिन छाडेका छैनन् । फिल्मी खबरबाट साभार